Intouch Medicare Medical Clinic Taling Chan ဘဏ်ခွဲကို ဘယ်လိုသွားရမလဲ။ - intouchmedicare
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း သလင်ချန် (Taling Chan) ဌာနခွဲ ခရီးစဥ်
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း သလင်ချန် (Taling Chan) ဌာနခွဲမှလာနိုင်သောနည်းလမ်း နံပတ် (1) MRT ဘန်ခွန်နွန် (MRT Bang Khun Non)
MRT ဘန်ခွန်နွန်ဘူတာ (MRT Bang Khun Non) ထွက်ပေါက် နံပတ် (3)နဲ့ထွက်ပြီး လိုင်းကား ဆောင်ထွဲ အပြာရောင် (สวนผัก-คลองบัว , สวนผัก32) သို့မဟုတ် အနီရောင်လိုင်းကားလေး ဆောင်ထွဲ (สวนผัก-รถไฟ) ကိုစီးပါ ဆွဲဝက်ချယဖိက် (Soi Wat Chaiyapruek) ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရပါ့မည်။ ထို့နောက်မီတာ ၃၀၀ ခန့်တည့်တည့်သွားလျှင် ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိအစိမ်းရောင်အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြင့် ဆေးခန်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။ MRT ဘန်ခွန်နွန်ဘူတာ (MRT Bang Khun Non) မှဆေးခန်းအထိ အကွာအဝေးမှာ ၈ ကီလိုမီတာခန့်ရှိပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြချိန်ဖြစ်သည်။
1. MRT ဘန်ခွန်နွန်ဘူတာ (Bang Khun Non) မှာဆင်းပြီး ထွက်ပေါက်နံပတ် (3) ကိုရွေးထွက်ပါ
2. ဘန်ခွန်နွန်ဘူတာမှာဆင်းပြီးနောက် အပြာရောင်လိုင်းကား မီနီဘတ်စ် ဆောင်ထွဲ(สวนผัก-คลองบัว , สวนผัก32) ကိုအသုံးပြုပါ။ သို့မဟုတ် အနီရောင်လိုင်းကားမီနီဘတ်စ် ဆောင်ထွဲ (สวนผัก-รถไฟ) ကိုစီးပြီး ဆွဲ ဝက်ချယဖိက် (Soi Wat Chaiyapruek) ၏ဝင်ပေါက်ရှိဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရပါ့မည်
3.ဆွဲဝက်ချယဖိက် (Soi Wat Chaiyapruek) ၏ဝင်ပေါက်ဘတ်စကားမှတ်တိုင်ကိုဆင်းပြီးနောက် ပိန်ကော့ (Pinklao) လမ်းဆီသို့ ဦးတည်လျှောက်လှမ်းပါ
4. ထိုအခါသင်သည် (top)စူပါမားကတ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ မီတာ ၅၀ လောက်လမ်းဆက်လျှောက်လျှင် ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိဆေးခန်းကိုတွေ့ရလိမ့်မည်
5. ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ ဆေးခန်းကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ (အစိမ်းရောင်တိုက်ခန်းကိုသတိပြုပါ)
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း သလင်ချန် (Taling Chan) ဌာနခွဲမှလာနိုင်သောနည်းလမ်း နံပတ် (2) ဘတ်စ်ကားဖြစ်သည့် ပိန်ကော့ (Pinklao) လမ်းမှ
ပိန်ကော့ (Pinklao) လမ်းမှ ဘတ်စ်ကားနံပတ် 28 , 40 , 515 , 511 , 124 , 198, 710 , 556 , 66, 507 , 516 , 35, 57, 127, 149, 524, 539, 511 များဆီးပြီး ချယဖိက် (Chaiyapruek) ကားမှတ်တိုင်မှာဆင်းပါ၊ ထို့နောက် ဆေးခန်းရှိရာသို့ တံတားနဲ့လမ်းကူးးလျှောက်ပါ။ ချယဖိက် (Chaiyapruek)ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှ ဆေးခန်းအထိအကွာအဝေးဟာမီတာ ၃၀၀ ခန့်ရှိပြီး ၅ မိနစ်ခန့်လောက်ကြာချိန်ဖြစ်သည်။
1. ဆွဲ ချယဖိက် (Chaiyapruek) ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွင်ဆင်းပါ
2. ထို့နောက်ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းရှိ လမ်းကူးတံတားဖြင့်ကူးပါ
3. လမ်းဖြတ်ကူးပြီးနောက် ပိန်ကော့လမ်း (Pinklao) ဖက်သို့ ပြန်လှည့်ပြီး လမ်းလျှေက်ပါ
4. ထိုအခါ လက်ဝဲဘက်ရှိ ထိပ်တန်း (Top) စူပါမားကတ်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မည်၊ ရှေ့တည့်တည့် မီတာ 50 ခန့်လောက်လမ်းလျှောက်လျှင် ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိဆေးခန်းကိုတွေ့လိမ့်မည်
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း သလင်ချန် (Taling Chan) ဌာနခွဲမှလာနိုင်သောနည်းလမ်း နံပတ် (3) ဘတ်စ်ကားဖြစ်သည့် ဘိုလိုမ်မလပ်ချချွန်နာနီလမ်း ကားမှတ်တိုင်မှ
ဘိုလိုမ်မလပ်ချချွန်နာနီ (Borommaratchachonnani) လမ်းမှဘတ်စ်ကားနံပတ် 28, 40, 511, 515 , 124 , 66 , 507 ,516 , 710 , 556 , 35, 57 ,123 , 127 ,149 , 524 , 539 , 511 များဆီးပြီး ဆွဲဝက်ချယဖိက်ကားမှတ်တိုင်မှာဆင်းပါ၊ ထို့နောက်မီတာ ၃၀၀ ခန့်တည့်တည့်လမ်းလျှောက်သွားလျှင် အစိမ်းရောင်တိုက်ခန်းတစ်ခုဖြင့်ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ ဆေးခန်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှဆေးခန်းအထိအကွာအဝေးသည်မီတာ ၁၅၀ ဖြစ်ပြီး၊ ၃ မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ရသည်။
1. ဆွဲဝက်ချယဖိက် (Soi Wat Chaiyapruek) ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွင်ဘတ်စ်ကားပေါ်မှဆင်းပါ။
2. ထို့နောက် Pinklao လမ်းသို့သွားရန်တည့်တည့်လမ်းလျှောက်ပါ၊
3. ဆက်၍ လမ်းလျှောက်လျှင် ဘယ်ဘက်ရှိ ထိပ်တန်း(Top)စူပါမားကတ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်၊ ဆက်ပြီးမီတာ ၅၀ ခန့်လောက်လမ်းလျှောက်ပါ သင့်ဘယ်ဘက်တွင်ဆေးခန်းကိုတွေ့ရှိရလိမ့်မည်
4. ဆေးခန်းသည် ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသည်။ (အစိမ်းရောင်တိုက်ခန်း ကိုသတိပြုပါ)
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း သလင်ချန် (Taling Chan) ဌာနခွဲမှလာနိုင်သောနည်းလမ်း နံပတ် (4) ကိုယ်ပိုင်ကားဖြင့် ဘိုလိုမ်မလပ်ချချွန်နာနီလမ်း(Borommaratchachonnani) သို့မဟုတ် ပုတ်ထမွန်းထုံးလမ်း(Phutthamonthon)
ဘိုလိုမ်မလပ်ချချွန်နာနီလမ်း(Borommaratchachonnani) သို့မဟုတ် ပုတ်ထမွန်းထုံးလမ်း(Phutthamonthon) လမ်းကနေခရီးသွားလာလျှင် ပိန်ကော့ (Pinklao) လမ်းမပေါ်သို့ဦးတည်မောင်းနှင်ပါ၊
1. ညာဘက်ကပ်မောင်းပြီး ဘိုလိုမ်မလပ်ချချွန်နာနီ (Borommaratchachonnani) လမ်းကို ဦးတည်ပါ
2. ထိုနောက် စျေးဘက်တွင်တည့်တည့်မောင်းနှင်လာပြီး ဆွဲဝက်ချယဖိက် (Soi Wat Chaiyapruek) ဘတ်စကားမှတ်တိုင်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးပါက ဘယ်ဘက်တွင်ကပ်မောင်းနှင်ပါ
3. မီတာ ၅၀ ခန့်လောက်မောင်းနှင်လာပြီးနောက် ဘယ်ဘက်ရှိ ထိပ်တန်း(Top)စူပါမားကတ်တွေ့လိမ့်မည်
4. နောက် မီတာ ၁၀၀ မောင်းနှင်လျှင်၊ လမ်းမကြီးဘေးရှိ ဘယ်ဘက်ခြမ်းဆေးခန်းကို တွေ့လိမ့်မည် (အစိမ်းရောင်တိုက်ခန်းဖြင့်)
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း သလင်ချန် (Taling Chan) ဌာနခွဲမှလာနိုင်သောနည်းလမ်း နံပတ် (5) ကိုယ်ပိုင်ကားဖြင့် ပိန်ကော့ (Pinklao) လမ်းမှ
ပိန်ကော့ (Pinklao) လမ်းဘက်ကထွက်လာလျှင် ဘိုလိုမ်မလပ်ချချွန်နာနီ (Borommaratchachonnani) လမ်းကိုမောင်းနှင်ပါ
1. နခွန်းပထွန် (Nakorn Pathom) ဆိုင်းဘုတ်ဘက်သို့မောင်းနှင်ပါ
3. ကီလိုမီတာ ၃၀ လောက်ဆက်မောင်းလျှင် လှည့်မည့်နေရာ(return)ကိုတွေ့လိမ့်မည် လှည့်လိုက်ပါ
4. 1 ကီလိုမီတာလောက်ဆက်သွားပါက ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ ထိပ် (Top) စူပါမားကက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်၊
5. နောက်မီတာ ၁၀၀ မောင်းနှင်လျှင်၊ လမ်းမကြီးဘေးရှိဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ အင်ထပ်မီဒီခဲဆေးခန်း ကိုတွေ့လိမ့်မည်။(အစိမ်းရောင်တိုက်ခန်းဖြင့်)